BMW X3 promotionရဲ့ဆုရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ဆုကိုလက်ခံရယူပြီးသွားပါပြီ
ဂုဏ်ယူပါတယ်BMW X3ဆုရှင် မိုဟာမက် အဂူ 19thJanuary,2016 ရက်နေ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာ မှ မစ္စတာ မိုဟာမက်အဂူဟာ သူ့ရဲ့ဆုဖြစ်တဲ့ အဖိုးတန် BMW X3ကားသစ်ကြီးကို လက်ခံရရှိသွားပါတယ်. လူကြီးမင်းတို့နဲ့ ဆုမဲဟာထိုက်တန်ပါတယ်!
Fbsမှာ tradeခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေဖြင့် ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရုံတင်မကဘဲ အခြားရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အခွင့်အရေးများ နှင်အောင်မြင် မှုများက သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါသည်. Fbsနှင့်အတူ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး BMW X3ကားသစ်ကြီးကို ဆုမဲပေါက်ချင်ပါသလား?
မိုဟာမက် အဂူ ဆိုလယ်ရ် ခါဖာဘီလာလိုမျိုအောင်မြင်ချင်ပါသလား? ကဲ ..ဘာကိုစောင့်နေမှာလဲ အခုပဲ Fbs ဝက်ဆိုဒ်ရဲ့ Promotion sectionကိုသွားပြီး မိမိနဲ့ကိုက်ညီမယ့် အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ. ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး အံအားသင့်ဖွယ်ဆုမဲများကိုရယူလိုက်ပါ. Fbsမှာ tradeတဲ့သူတိုင်း အခွင့်အရေးရှိပါတယ်.